News in Shona 27-7-06 - The Zimbabwean
News in Shona 27-7-06
Operation Maguta - state-sanctioned slavery
Operation Maguta yaunza chibharo
INSIZA - Mumwe mugari wekuno kuInsiza anonzi Lydia Sibanda akavhundutswa apo akanzwa pito ichirira parunyanhiriri, ndokuona masoja achiti piti-piti muruzevha achimanikidza van
hu kuti vaende kunosakurira chibage chemuchando kuchitonhora zvinoshura mare – ndicho chirongwa cheMaguta.
Haatombozivi kuti achapiwa mari yechibage chake ichi chaari kumanikidzirwa kurima uye chichatorwa achida asingade kana chichinge chaibva.
Paakambozorora nevamwe ava masikati mudzimai uyu nevamwe vaingoshoropodza kumanikidzwa kwavari kuitwa nehurumende kurima paSilalatshani Irrigation Scheme.
Silalatshani yaiva purazi remurungu rakabvutwa uye rava pasi peZimbabwe National Army. Avo vanotsoropodza zvirikuitwa vanotaura nechizeve-zeve nekutya masoja anenge achifamba-famba.
Vamwe mai vaiva nevana vatatu, ivo vakawonda serutsanga, uye vaine chirokwe chakasakara ndivo vainyatso tsoropodza, asi vakaramba kutipa zita ravo.
Mwana wavo wetatu uyo akange aine marariya ainzwiikwa achingochema ari mukatumba kehuswa.
Akati akange asina nguva yekuendesa mwana wacho kuchipatara nokuti vainzi vashande zuva rose mumunda..
“Taneta nekubatwa sevaranda tichimakidzwa kushanda tisina chatadya.
Ivo ndivo vakaunza nzara yacho asi vava kutishandisa isu semadhongi,” sekutaura kwakaita maMkiza, mumwewo mudzimai aiva pedyo, uye aine nzara.
“Hamungambopomera mhosva kushaikwa kwemvura kana kuzvirango zvematongerwo enyika. Isu tinozviziva kuti ihurumende yakadzinga varimi vachena ndokupa ivhu racho kuvanhu vasina chavanacho chokurimisa.”
Vamwe vake, nokuziva zvavanomboitwa nemasoja vaingomutarisa nemeso vchiti, “Nyarara iwe” asi iye akaramba achienderera achiti: “Hapana chokuvanza pano, masoja anotirova. Munhu wose ari kutaura nezvazvo.”
Apo vakabvisa vachena, masoja ndiwo akabva atora matomu anamuzvinapurazi kuri kuitira kuti chikafu chiwanikwe, kusazoita nzara.
Masoja akabva aisa makamba awo mumapurazi ose akaiswa vanhu kuMatebeleland ndokutanga kuvakamhanisa kuti varime zvakanyanya chibage. Avo vakange varima mahanyanisi, matomati nezvimwe zvavaida kuzotengesa vakamanikidza kuzvirimira pasi nemagejo.
Ini ndakaona vagari vemuSilalatshani Irrigation Scheme kuInsiza vachimanikidzwa nemasoja ane pfuti kuti vasakurire minda yechibage netwumapadza twupfupi-pfupi, mamwe masoja acho achitoseka vanhu ava.
Varanda pachena ava vaitangiswa basa na6 mangwanani,vopiwa nguva yekumbozorora na12 dzemasikati, apo vaidya chikafu chavo chemasikati icho chaingove sadza nemuriwo.
Mashoko aibvakowo aiti masoja airakasha vanhu vaiva nehusimbe kana vakange vasingavateereri. Chero tisina hedu kuwona izvi zvichiitika, zvatakawona paSilalatshani zvakaratidza kuti chaive chokwadi, uye zvatakaudzwa zvairatidza kuti masoja aitoda zvekubvisa vanhu hunhu hwavo.
Thousands attend nation-wide MDC rallies
Mhomho dzevanhu kumarhari eMDC
KWEKWE – Mutungamiri weMDC VaMorgan Tsvangirai vakabata Nkayi neKwekwe svondo rakapera pachirongwa chavo chekunyeurira vanhu nekunzwawo kubva kwavari nezvekushushikana kwavari kuta pamusana pehurumende yeZanu.
Kwose kwavakaenda kwaiva nenhandare dzakazara ,vanhu vachivaudza kuti kune zvimwe zvipurunyenye zvemumatongerwo enyika zvaifamba muvanhu zvichiti MDC yaparara.
“Asi vaifara kuwona voga kuti bato ravo rakange rakangosimba, uye richitowedzerwa kusimba nekuuya kwavaTsvangirai kuzovazivisa kuti chitimachorusunguko chakange chichiri mugwara,” vakadaro vaChamisa – munyori wekuburitswa kwemashoko.
VaTsvangirai vakaudza vanhu kuti ramangwana ravo raiva mumawoko mavo uye mushonga weZimbabwe waive mukushanda pamwe kwavo kuti vanhu vamanikidze chihurumende kuti chibvume kugadzirisa nyika pasina mhirizhonga.
NeSvondo VaTsvangirai nechikwata chavo cherusununguko vakataura kuvanhu vaisvika 12,000 muMbizo Grounds kuKwekwe uko kwavakaudzwa kuti vanhu vakange vaneta nekudzimirwa magetsi mazuva ese, mitengo inongokwira pazvinhu zvemazuva ese kusanganisira parafini, mishonga, mari dzechikoro nechikafu.
VaTsvangirai vakaudza vanhu kuti vatore chinhano chavo chekuponesa nyika.
Mamwe marhari eMDC akaitwawo kuStodart Hall Mbare (1,500) nepaOK muGlen Norah B (10,000, kwaMakoni (North and East), paGwangwadza Business Centre kuMakoni West, Mutare Central – vose vachingoti vaneta neZanu (PF).
Mugabe’s descent from icon to despot
Mugabe abva pakuremekedzwa achiva chikara
WASHINGTON – Sangano revemapato evashandi vechitema rekuUnited States (The Coalition of Black Trade Unionists – CBTU) ratanga chirongwa chekusveeredza mutungamiri weZimbabwe uyo achiri kuwonekwa segamba rerusununguko kune vamwe muAmerica.
Chirongwa chavo ndechekudzidzisa vanhu kuti vasambofa vakazonyeperwa kuti President Mugabe igamba, asi kuti inhunzva-tunzva inodzvinyirira vanhu vatema.
Mutungamiri weCBTU VaWilliam Lucy vakati sangano ravo raizopinda kwese kwese nyanyenyanye kumasaisai enhepfenyuro dzemuAmerica nemumapepanhau avo kuti vachitangisa kunyatsoongorora zviri kuitika muZimbabwe.
VaLucy vakati vachabatanawo nevamwe vanoratidzira pamaEmbasi eZimbabwe.
Mitengo yezvemazuva ose yobowora denga
HARARE – Mitengo yezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose nevanhu yakakwira zvakatoda kupetwa kaviri svondo rakapera.
Izvi zvakaitika chero zvazvo hurumende iri kuedza kuti mitengo yezvinodiwa mazuva ose – zvakaita sehupfu, mafuta ekubikisa nechingwa – zvisakwidzwe.
Asi zvakazoramba apo vemabhizimisi vakati hatingarambi tichingotenga zvinhu zvinodhura tichitengesa nemari iri pasi.
Kubva muna Ndira (January) dhora remuZimbabwe rakadzikira zvakare zvakapetwa kana richitariswa nedhora rekuAmerica, zvichibva mukutengeseranwa kuri kuitwa mari dzekunze pamisika isiri pamutemo.
Chingwa chakakwira kubva paZ$130,000 kuenda pa$210,000. makombi akateverawo mushure mekukwidzwa kwepeturo zvokuti Kuwadzana yave kuita $150,000, Chitungwiza ichiita $200,000 kubva pa$150,000.
Hurumende yakazobvumira ZESA (Zimbabwe Electricity Supply Authority) kuti ikwidze magetsi kakapetwa kaviri.- Own correspondent
Mugabe refuses to pay school fees
Ba’ Chatunga vati kwete iyi ndeyekwenyu!
HARARE – Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vanonzi vakaramba kubhadhara mari yechikoro yemwana wavo mudiki Chatunga ndokuudza Gurukota rezvedzidzo vaAeneas Chigwedere kuti vaudze chikoro cheHartman House kuti chidzikise mari yacho kubva paZ$109million kusvika paZ$53 million.
Chatunga ane makore mapfumbamwe.
VaChigwedere vakazonyora tsamba kuchikoro ichi vachiti kukwidzwa kwemari dzechikoro neHartman House kwaisaenderana nekukwira kwakaita zvinhu munyika kunoratidzwa neConsumer Price Index (CPI), asi chikoro chiri kuti zvinoenderana.
Zvinoshamisa kuti vamwe vabereki vose vakatobhadhara mari yechikoro yakwidzwa asi VaMugabe havasati.
Zvose zvikoro zvehurumende nezvakazvimirira zvatambura kuedza kuti zvinhu zvirambe zvakadaro kunyange mitengo yezvinhu yakanyanyisa kukwira uye zvimwe zvinhu zvizhinji zvichishayikwa.
Zvikoro zvizhinji zvehurumende zvava kutadza kupa dzidzo ine chiremera zvichikonzerwa nekusapiwa mari yakakwana nehurumende yacho uye kushayiwa maticha, mabhuku nezvimwewo zvinodiwa zvakaita sechoko.-NeMunyori Wedu.